क्रिप्टोकरेन्सी मुद्राले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्न सक्ला ? - Khabar Break | Khabar Break
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ / बाणिज्य
क्रिप्टोकरेन्सी मुद्राले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्न सक्ला ?
भदौ १८- बैङ्क अफ इङल्यान्डका गभर्नर मार्क कार्नीले फेसबुकको लिब्राजस्तै क्रिप्टोकरेन्सीले एक दिन विदेशी विनिमय बजारमा अमेरिकी डलरको एकल साम्राज्य ढाल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्नीले हालै केन्द्रीय बैङ्करहरूको ज्याक्सन होल सिम्पोजियममा अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी आधिपत्य जोगाउन केही सुझावहरु दिए ।
“प्रमुख मुद्राले सधैँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको मान्यता हासिल गरेको हुन्छ,”, ओस्ट्रम एसेट म्यानेजमेन्टका अनुसन्धान प्रमुख फिलिप विच्टरले उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्वव्यापी विदेशी विनिमय सञ्चितिको करिब ६२ प्रतिशत हिस्सा डलरको थियो ।
युरोपेलीको एकल मुद्रा यूरोको २०।२ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा थियो । जबकि अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उदय भएपनि चिनियाँ युआनले दुई प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ ।
“व्यापार र अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग सापेक्षित रुपमा सीमित प्रत्यक्ष जोखिमबाट मुलुकहरुको वित्तीय अवस्था दुवैमा अमेरिकी विकासले अत्यावश्यकीय प्रभाव सिर्जना गरिरहेको छ,” वाओमिङमा हालै बैङ्करहरूसँगको भेटमा कार्नीले भने।
कार्नीका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा सरकारले नयाँ भर्चुअल मुद्राका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । “सार्वजनिक क्षेत्र सम्भवतः केन्द्रीय बैङ्कहरुको सञ्जाल मार्फत डिजिटल मुद्रा ९क्रिप्टोकरेन्सी० लाई खुला प्रचलनमा ल्याउन सक्लान् त भन्ने यो एउटा खुला प्रश्न हो”, कार्नीले भने। फेरि पनि केन्द्रीय बैङ्करहरू र विश्वका नेताहरू क्रिप्टोकरेन्सीको वर्तमान खेतीप्रति चिन्तित रहेका छन् किनकी तिनीहरू अवैध र अनियन्त्रित छन् ।
गभर्नर कार्नीले जुन महिनामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले सार्वजनिक गरेको लिब्रा नामको क्रिप्टोकरेन्सीको उदाहरण दिए। कार्नीले बिटकोइनका बारेमा केही भनेनन्। समकालीन विश्वमा यो सबैभन्दा लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा हो तर यसमाथि विश्वासको संकट छ ।
“केन्द्रीय बैङ्कहरू परिवत्र्य मुद्रालाई निजीकरण गर्ने फेसबुकको प्रयासबाट केही क्रुद्ध बनेका छन्”, पेरिस स्कूल अफ इकोनमिक्सका अनुसन्धाता एग्नेस बेनासी–क्वेरले भने।
लिब्रा फेसबुकसहित १०० साझेदार फर्महरूद्वारा सह–व्यवस्थित हुनेछ जबकि बिटकोइन पूर्ण रुपमा विकेन्द्रीत छ । -केभिन ट्रबलेट(अनुवादः दिलीप अधिकारी)
क‌ांग्रेस प्रमुख सोनियाद्वारा गृहमन्त्री अमित शाहको राजीनामा माग
दिल्ली हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुग्यो